Social Media Marketing Archives - The Khant Digital
Social Media Marketing ကို စီးပွားရေးမှာ ဘာ့ကြောင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာကြတာလဲ?
by Frank | Nov 13, 2020 | Social Media Marketing
Digital Marketing ရဲ့ ကဏ္ဍခွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Social Media Marketing ဟာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ ဒီလို ကျယ်ပြန့်လာတာဟာ Facebook, Instagram, Twitter & LinkedIn တို့ကို အသုံးပြုတဲ့ Social Media Marketing ရဲ့ တိုးပွားဖြန့်ကျက်နိုင်မှု အားကောင်းတဲ့...
Social Media Marketing ကို သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရွေးချယ်ကြမယ်…
Social Media Marketing ဟာ Products တွေနှင့် Services တွေကို Promote လုပ်ဖို့အတွက် Facebook, Instagram တို့လို Social Media Platforms တွေ၊ Websites တွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Academic ပိုင်းမှာ E-marketing, Digital-marketing စသော Terms တွေက ကြီးစိုးပေမယ့်...
Facebook Marketing ဆိုတာဘာလဲ?
by Frank | Nov 13, 2020 | Facebook Marketing, Social Media Marketing
Facebook marketing ဆိုတာ Social Media Marketing ထဲကအပိုင်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုပါ။ ယနေ့ခတ် အမျိုးသမီး အမျိုးသား တော်တော်များများဟာ Social Media နဲ့မကင်းကြပါဘူး။ များပြားလှတဲ့ Social Media တွေထဲမှာမှ Facebook ဟာ လူသုံးအများဆုံးနဲ့ ရေဗန်းစားမမှားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ယနေ့ခတ်မှာ...
Woo-commerce Coupon Pop-up Edit
Keyboard Shortcut ကိုသုံးပြီး Google Chrome Browser ပေါ်က Browsing Data တွေကို အလွယ်တကူ Clear လုပ်ကြမယ်။
5 New Features In WordPress 5.6
𝗪𝗼𝗿𝗱𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 အကြောင်း သိကောင်းစရာ (𝗣𝗮𝗿𝘁 2)
𝗪𝗼𝗿𝗱𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 အကြောင်း သိကောင်းစရာ (𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟭)
Copyright @ 2021 | The Khant Digital